China Lauryl Dimethyl Amine oxide, CAS NO.1643-20-5, OA-12 mveliso kunye nabenzi | Imichiza yaseKerui
Igama lezorhwebo: OA-12
I-OA-12 luhlobo lwe-zwitterionic surfactant, ulwelo olunombala olungafihli nto, ulwelo olubuthathaka lwe-cationic, i-cationic kwi-acidic medium, i-nonionic kwi-alkaline medium, inyibilikiswa emanzini kunye ne-polar organic solvent, inyibilika kancinci kwisinyibilikisi se-nonpolar organic.
I-OA-12 ine-thickening egqwesileyo, i-anti-static, ithambile, ukubola kunye nokusebenza kwe-foam.
I-OA-12 inentsebenzo ephantsi engacaphukisiyo, engenakuphelisa kuphela into yokuhlambela i-anionic, kodwa ikwanayo ne-bactericidal, Ca-soap dispersion, ukuba sesichengeni sokonakaliswa kwezinto eziphilayo njalo njalo.
I-OA-12 isetyenziselwa ishampu eyenza iinwele zithambe ngakumbi, kulula ukuzikama, amagwebu ngokugqibeleleyo, kunye nokukhanya okutyebileyo. I-OA-10 ingasetyenziselwa i-tableware, i-lavatory, ukwakha udonga lwangaphandle kunye nezinye izinto ezilukhuni, iarhente yokucoca ukunika iimveliso ukondla, ukunciphisa ukuvuselela kunye ne-synergism.
I-OA-12 inezibonelelo zedosi encinci, ukusebenza kakuhle, ukumanzisa okunamandla xa kuthelekiswa ne-6501 yemveli.
Umbala wokukhanya ulwelo elityheli elityheli
Igubu leplastiki le-50kg kunye ne-200kg. Ukugcina unyaka omnye kwigumbi elinomthunzi nendawo eyomileyo.
Kulumkele ukunxibelelana neliso nolusu, wakuba uqhagamshelene nawe, gungxula ngamanzi.
ULauryl Dimethyl Amine oxide, OA-12, i-OB-2